Qoritaanka Qancinta ee Ardayda Kulliyada 2022
Qoritaanka Qancinta ee Ardayda Kulliyada
Sida Loo Qoro Dood Qancin Leh Meelaynta Kulliyada
Samaynta dood qoraal ah oo qancisa kulliyadda
Hadafka Qorista Qancinta ee Kulliyadda
Sida Loogu Diyaargaroobo Qoritaanka Warqad Lagu Qancinayo Kulliyadda
Sida Loo Sameeyo Warqad qancisa Kulliyada
Ardayda kuleejku waxay qoraan waraaqo badan, qaar badan oo ka mid ah waraaqahaas waa kuwo lagu qanci karo dabeecadda, taas oo ah sababta dhammaan ardaydu u baahan yihiin inay ogaadaan sida loo qoro warqad qancin ah.
Qoritaanka dood wax ku ool ah oo wax ku ool ah waa farshaxan, laakiin sida nooc kasta oo farshaxan, waxa lagu baran karaa oo lagu dhammaystiri karaa hab-dhaqan. Waxa ugu muhiimsan in la xasuusto markaad wax u qorayso si qancin ah qoraa sheeko waa in aad inta badan la tacaasho saddex nooc oo su'aalo ah:
Su'aalaha dhabta ah, kuwaas oo wax ka weydiinaya runta ama been-abuurka sheegashada;
Su'aalaha qiimaha leh, kuwaas oo wax ka weydiinaya qiimaha ama anshaxa fikradda ama ficilka;
Su'aalaha siyaasadda, kuwaas oo weydiinaya in tallaabo gaar ah la qaadayo iyo in kale.
Waxaa laga yaabaa sababta oo ah kakanaanta asalka ah ee su'aalahan sida kuwa kore, qancinta ayaa marar badan loo arkaa midka ugu adag dhammaan noocyada qorista; iyadoo ay taasi run noqon karto, haddana qoraalka qancinta ahi waxa uu sidoo kale noqon karaa mid aad u faa'iido badan, gaar ahaan marka uu qoraagu ogaado in uu soo bandhigay dood adag oo, ugu yaraan, siinaysa akhristayaasha sabab macquul ah oo ay dib ugu eegaan waxa ay aaminsan yihiin.
Marka aad wax u qorayso si qancisa, hadafka ugu dambeeya ee qoraagu waa in uu ka hor yimaado rumaysadka akhristayaasha iyo, ugu dambayntii, u dhaqaajiya akhristayaasha in ay aqbalaan caqiido kale oo ka saxsan tooda.
Dabcan, waxaa ku jira dhibaatadu, mar kasta oo aad wax u qorto si aad u qanciso, waxaad caadi ahaan la tacaalaysaa mawduucyo muran badan oo inta badan qiirada badan leh kuwaas oo akhristayaashaadu ay horay u soo diyaariyeen fikrado adag, fikrado ay u badan tahay inay si adag u qaataan, iyo maadaama ay leeyihiin fikrado qoto dheer. , akhristayaasha aad ayay u adkaysanayaan is-beddelka, ka dibna, dood kasta oo aad soo bandhigi karto oo caqabad ku ah fikradahaas.
Ka fakar. Haddii aad qorto maqaal wargelin ah oo ku saabsan mawduuca ilmo iska soo rididda, tusaale ahaan, waxaad si fudud u dhaqmaysaa sidii macallin oo, sidaas darteed, kaliya waxaad soo bandhigaysaa macluumaadka; isku day maysid inaad akhristayaashaada ka dhaadhiciso ilmo iska soo rididda ama diido.
Dhanka kale, maqaal qancin ah oo isla mowduuca ku saabsan, waa in aad dhinac ka raacdaa – ama ka-hortagga ilmo iska soo rididda – oo kaliya ma difaacdo aragtidaada laakiin sidoo kale isku day inaad akhristayaashaada ka dhaadhiciso laba shay:
Aragtidooda waa khalad.
Waa inay aqbalaan fikrad kale, oo macneheedu yahay kaaga, taasoo laga yaabo inay si buuxda uga soo horjeedaan tooda, maadaama ay ka sharci badan yihiin, ama ugu yaraan ay qirtaan in aragtidan ka soo horjeeda ay tahay beddel lagu qanco oo ka duwan wixii ay iyagu weligood rumaysnaayeen.
Maadaama hadafka ugu dambeeya ee qoraalka qancintu uu yahay hawsha culus ee beddelka caqiidooyinka muddada dheer la aaminsan yahay, waxaa lama huraan ah inaad si fiican u diyaargarowdo oo aad si fiican u diyaargarowdo intaadan bilaabin inaad curiso warqaddaada dhabta ah. Bilawga, waa in aad samayso cilmi-baadhis ballaadhan, waayo kaliya adiga oo aqoon u leh mawduuca laga soo xushay dhinac walba waxa aad ku xaqiijin kartaa kalsoonidaada indhaha akhristayaasha.
Marka labaad, waa in aad odorosaa wixii su'aalo ah oo ay akhristayaasha ku waydiin karaan ka dibna ka hadal su'aalahaas gudaha warqadda, sida aad sidoo kale u saadaaliso oo aad wax uga qabato dood kasta oo ka soo horjeeda. Ma beddeli kartid dhegeystayaasha shakiga leh ilaa aad si toos ah ula macaamilooto sababaha shakigooda; taladiisuna waxay khusaysaa wax qorista si la mid ah sida ay dadka ugu sarreeyo.
Cilmi baaris ayaa lagu ogaaday in dadku ay aqbalaan dood mid ka mid ah afar arrimood:
Waxay u arkaan qoraaga ama afhayeenka inuu leeyahay kalsooni;
Waxay ku guulaysteen caddayn;
Waxay ku qanacsan yihiin sabab macquul ah;
Waxay ku dhaqaaqeen rafcaan shucuureed.
Marka la soo koobo, haddii aad awood u yeelan karto inaad ku darto dhammaan afarta walxood ee kor ku xusan - kalsoonida, caddaynta, sababaynta, iyo dareenka - doodaada, fursadaha aad ayey u badan tahay in akhristayaasha doodaas lagu qanciyo inay aqbalaan aragtidaada, ama ugu yaraan ay leeyihiin wax ku filan. sabab ay dib ugu baaraan tooda.
Sida Loo Qoro Qormo Wanaagsan Jaamacadda
Tilmaamaha lagu qoro Resume Resume
Aaladaha ugu Fiican ee Ardayda Waxbarashada Internetka ah
Previous Post:Codso CarINDIGO $ 1000 Dib -u -eegista Baabuurka/Deeq -waxbarasho
Post Next:7 Sababood oo ay tahay inaad u tixgeliso inaad wax ku barato UK